आफ्नै कलेजो का’टेर श्रीमानलाई जीवन दान दिने’ यी महान नारीलाई तपाईंहरु के भन्नुहुन्छ ? – Kavrepati
नयाँ बसपार्क याैनबजारः रात परेसँगै प्रहरीकै अगाडि यस्तो बार्गेनिङ – भिडियोमै हेर्नुस्
कहिलेकाही टिकटक बनाउने छोरीको फोटो आएपछि पो थाहा भो छोरी त वयश्क फिल्मकी स्टार
मामा र भान्जी रा ती एउटै खा टमा ना ङ्गै भेटिए,मामाको यसरी फ काएका रहेछन् भान्जिलाई (भिडियो हेर्नुस्)
श्रीमानले कोरियावाट भिसा र टिकट पठाएको दिन श्रीमती अन्तै हिडिन्, श्रीमान एकाएक नेपाल आए (भिडियो हेर्नुस्)
पलसँगको सम्बन्धबारे बोलिन् समिक्षा, ‘मैले यो अपेक्षा गरेकी थिइन’, आखिर के हो त बास्तबिकता ? (भिडियो सहित)
शाहरुखले भनेका थिए, ‘मेरो नाम र प्रसिद्धिले मेरो छोराछोरीलाई समस्या पार्न सक्छ’ (भिडियो हेर्नुस्)
समिक्षा अधिकारी मिडियामाथि खनिदै लेखिन लामो स्टाटस,पल शाह संग के छ सम्बन्ध ? पढ्नुहोस
गसीपमा पल-समीक्षा : प्रेम, विवाद र समझदारीको अन्तरकथा
‘मलाई सलमान खान मनपर्छ, बिहेपनि उहाँसँगै गर्न चाहान्छु’- सुष्मा कार्की
Home / समाचार / आफ्नै कलेजो का’टेर श्रीमानलाई जीवन दान दिने’ यी महान नारीलाई तपाईंहरु के भन्नुहुन्छ ?
आफ्नै कलेजो का’टेर श्रीमानलाई जीवन दान दिने’ यी महान नारीलाई तपाईंहरु के भन्नुहुन्छ ?
admin2weeks ago	समाचार Leaveacomment 145 Views
सप्तकोशी नदीमा हा’मफालेर बेपत्ता भएका युवा ओखलढुङ्गाका तिलक प्रसाद दाहाल
काठमाडौं । चितवन मेडिकल कलेजमा कलेजो प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक भएको छ । जाजरकोट जिल्ला कुशे गाउँपालिका–९ का ४७ वर्षीय भरतविक्रम शाहीको कलेजका चिकित्सकले अठार घण्टा लगाएर शाहीलाई कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको हो । कलेजद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कलेजका कार्यकारी निर्देशक प्रताप देवकोटाले शाहीलाई उहाँकी धर्मपत्नी कमलादेवीले ६० प्रतिशत कलेजो प्रदान गर्नुभएको थियो ।
अस्पतालका विषेशज्ञ चिकित्सक सर्जन डा सञ्जयकुमार यादव, डा एकानन्द सिंह, डा जयन्तकुमार शाह, हेपाटोलोजी डा सागर पौडेल, डा वरुण श्रेष्ठ, एनेस्थेसिया डा किरण अधिकारी, डा नवीन यादव, डा सुरेश गौतम, डा वीरेन्द्र राउत, रेडियोलोजिष्ट डा दीपक अधिकारी, डा सुवास ओझासहितका टोली प्रत्यारोपणमा सहभागी हुनुहुन्थ्योे ।
प्रत्यारोपणमा भारतको एपोलो अस्पतालका विषेशज्ञ चिकित्सकको सहभागिता रहेको थियो । कार्यकारी निर्देशक देवकोटाका अनुसार सिरोसिस् अफ लिभरको सी चरणमा पुगेका बिरामीलाई कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको हो । काठमाडौँमा कलेजोको जाँच तथा उपचार गराउँदै आउनुभएका शाही दुई साताअघि मात्रै चितवन मेडिकल कलेज आउनुभएको जनाइएको छ । सिरोसिस् अफ लिभरको ‘ए’ ‘बि’ ‘सि’ चरणमध्ये शाही ‘सी’ चरणमा पुगेको जनाउँदै डा यादवले भन्नुभयो,
कलेजलो दाता कमलादेवीको स्वास्थ्यमा सुधारपछि उहाँलाई यही असार २७ गते नै अस्पतालबाट घर पठाइएको छ । शाहीको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै गइरहेको चिकित्सक यादवको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेकै गतिमा सुधार भए आगामी साता उहाँलाई समेत घर पठाउन सकिने अवस्था छ ।”
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “दुई देखि तीन महिनामा दुबै जनामा कलेजोको अवस्थामा वृद्धि भएर ९० देखि ९५ प्रतिशत पलाएर आउछ । उहाँहरू दुबै जना सामान्य जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ ।”पत्रकार सम्मेलनमा हेपाटोलोजी डा पौडेलले प्रत्यारोपणका क्रममा झण्डैं १३ युनिट रगत खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । सो कलेजले दोस्रो प्रत्यारोपण सफल गरेको हो । उहाँले अघिल्लो प्रत्यारोपणमा एक÷दुई युनिट रगतले नै पुगेको बताउनुभयो ।
बिरामी शाहीको कलेजोमा रगत जानै नसक्ने ‘ब्लकेज’ अवस्थामा रहेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सिरोसिस् भएका १० देखि १५ प्रतिशत बिरामिमा यस्तो समस्या हुन्छ ।” कलेजोको अन्य समस्या भएपछि गरिने प्रत्यारोपणमा भन्दा यस्तो समस्यामा प्रत्यारोपण गराउनु निकै जटिल भएको उहाँको भनाइ छ ।
यस अस्पतालमा हाल दैनिक १५ कलेजोका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको सो अवसरमा जानकारी गराइयो । तीमध्ये १० देखि २० प्रतिशत बिरामीको कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने देखिने गरेको छ । कलेजले यसअघि काठमाडौँकी धनकुमारी तामाङ्को कलेजो प्रत्यारोपण गरेको थियो ।
Previous पूजा आकाशको बिहे होस् भन्नेलाई दिए यस्तो भावुक सन्देश : ब्रेकअप हल्लाले फ्यान डिप्रेसनमा गएको खबरले झर्यो पुजा आकाशको आँशु (भिडियो हेर्नुस्)
Next सीताको मृ त्यु भएको ३१ दिन पछि ३ जना परिवारलाई थु न्यो प्रहरीले (भिडियो हेर्नुस्)
‘हजुर र म भोली से,’क्स गर्नी है’ भन्दै महिला शिक्षकलाई यौ,’न प्रस्ताव राख्ने शिक्षक नेता …